माओवादीहरुले हाम्रै भात खाए, १ लाख रुपैयाँ चन्दा पनि लिए त्यसपछि आमालाई मारे !
Homeरोचक / विचित्रमाओवादीहरुले हाम्रै भात खाए, १ लाख रुपैयाँ चन्दा पनि लिए त्यसपछि आमालाई मारे !
November 2, 2018 Spnews रोचक / विचित्र, समाचार Comments Off on माओवादीहरुले हाम्रै भात खाए, १ लाख रुपैयाँ चन्दा पनि लिए त्यसपछि आमालाई मारे !
माअाेवादीद्वारा हत्या गरिएकी निर्दाेष रेलीमाया मोक्ताननिर्दोषको हत्या हुनु र दोषी खुलेआम हिड्नु यो कस्तो न्याय हो ? मलाई थाहा छ यो सबै पैसा र पावरको कारणले भईरहेको छ । यो १३ वर्षमा केही हुन सकेन । अब पनि केही होला भन्ने आश छैन । निर्दोष मेरी आमालाई किन हत्या गरियो ? यसको जवाफ नपाउन्जेलसम्म मेरो परिवारले सन्तोषको सास फेर्न सक्दैन । नत निदाउन नै सक्छ । न त केही गर्न नै यही प्रश्नले विगत १३ वर्षदेखि हामी मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका छौं । अझैपनि भईनै रहेका छौं ।जीवन चलाउन जसो तसो बाच्नु पर्छ । हामी बाच्नु भनेको नै त्यसको जवाफ खोजी गर्नु हो ।
जनयुद्ध नामका आपराधिक घटनाका हामी पीडित हौं । शहीद परिवारलाई सरकारले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो । छात्रवृत्ति लिन म गाउ गएको थिएँ । तर, अर्कैले झिकेर लगिसकेछ । सरकारले दिने अन्य राहतमा पनि धेरै नै झेल भयो । त्यसको आधिमात्र हामीले किस्ता किस्ता गरेर पायौं, जसको कारण त्यो राहत काम लागेन । आमाको हत्या पछि हामी पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका छौं ।
मैले आफ्नो पढाई निरन्तर गर्न पनि पाइनँ । त्यसपछि हामी गाउ फर्कन सकेका छैनौं । आमाको हत्या गरेर पनि माओबादीलाई पुगेन हाम्रो घरको औषधि भाडाकुडा लत्ताकपडा सबै लुटेर ताला लगााईदियो । बुवा ठेक्कापट्टाको काम गर्नुहुन्थ्यो । आमाले मेडिकलमा काम नगरि घर व्यवहार चलाउन गाहे थियो । आमाको हत्यापछि हामी मानसिक र आर्थिक रुपमा विक्षिप्त भएका छौं । त्यसमाथि यत्रो वर्षसम्म न्याय नपाउँदा हाम्रो धैर्यताको बाँध टुटिसकेका छ । मेरो आमालाई अनाहकमा किन मारियो ? यसको जवाफ यो १३ वर्षसम्म पाएको छैन । हामी यसको जवाफको प्रतिक्षामा छौं ।
गल्ती गरेको हो भने राज्यले प्रमाणित गर्नुपर्‍यो नत्र सत्य तथ्य छानविन गरेर न्याय दिलाउनुपर्‍यो ।हामीले धेरै ठाउमा उजुरी गर्‍यौ न्याय कतैबाट पाईएन । अब त झन न्याय पाउने आश छैन । किनकि, अब दोषी नै सत्ता र त्यसको वरीपरी घुमिरहेको छ । हामीले मनको शाान्तिको लागि भएपनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्धा दर्ता गरेका हौ । हामी ज्यानको बदला ज्यान भन्दैनौं । किनकी हामी मान्छे हौं । अरुको रगत पिएर खुसी हुने हामी माओवादी पनि होइनौं । हामी आपराधिक मानसिकताका छैनौं ।
युद्धका नाममा भएका हत्या र हत्यारालाई कारबाही गर्दै जाने हो अहिलेका धेरै नेताहरु कारबाहीमा पर्छन । हामी बदला भन्दा पनि हत्याको कारण र न्यायको खोजीमा छौं ।जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो । उहाँको निर्देशनमा नै धेरै निर्दोष नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । म जस्ता धेरै छोराछोरी टुहुरा भए । धेरै दिदीबहिनीहरुको सिन्दुर पुछियो । धेरै बुवाआमाले निर्दोष छोराछोरी गुमाउनुपर्‍यो ।
देश परिवर्तन गरेर हिड्छु भन्ने हाम्रो दाजुभाई शहिद भए । प्रचण्ड बारम्बार भन्नुहुन्छ ‘धान पिस्दा घुन पिसिनु स्वाभाविक हो ।’ हाम्रो निर्दोष आमाको हत्या भएको छ । हामी टुहरा भएका छौं । धेरै दिदी बहीनीको सिउँदोको सिन्दुर पुछिएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँको त्यस्तो अभिव्यक्तिले हाम्रो मन कति दुख्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू ! हामीलाई टुहुरो हुँदा भन्नुहुन्थ्यो ‘देश परिवर्तन गर्छु । म जस्ता टुहुरो र विधुवा धेरै भए खोई परिवर्तन ! खोई विकास ! खोई न्याय ! खोई हामीलाई जवाफ ।
(रेलीमाया मोक्तानकी छोरी ममता मोक्तानसँंग सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
१ लाख रुपैयाँ चन्दा पनि लिए त्यसपछि आमालाई मारे !
माओवादीहरुले हाम्रै भात खाए
एकैपटक ४ जना बच्चालाई जन्म ! आमा भन्छिन् -एउटालाई फकाउन थाल्यो, अर्को रुन्थ्यो
भाइरल जोडी: अर्को नयाँ खुलासा – बखत र प्रतिभाले गरे यस्तो अपिल